Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Saint Kitts na Nevis » 75% nke St Kitts na Nevis lekwasịrị ndị mmadụ ọgwụ mgbochi
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Saint Kitts na Nevis • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Dị ka agwaetiti dịpụrụ adịpụ dịpụrụ adịpụ na mpaghara Caribbean, St Kitts na Nevis emeela ọganihu kemgbe ọtụtụ afọ iji wulite akụ na ụba na-akwado onwe ya. Ọtụtụ ego obodo na -enweta na -adabere na njem nlegharị anya.
Gọọmentị St Kitts na Nevis na-emefu ihe karịrị nde $ 18 iji lụso ọrịa COVID-19 ọgụ.
A na-enweta ụzọ ụzọ atọ nke St Kitts na Nevis lekwasịrị anya ọgwụ mgbochi mbụ nke COVID-19.
Prime Minista kelekwara St Kitts na ndị mmekọ Nevis maka mmesapụ aka ha n'inye ọgwụ mgbochi.
St Kitts na Nevis emefuola ihe karịrị nde $ 18 nde EC iji gbochie mgbasa nke ọrịa COVID-19, Prime Minista Timothy Harris kwuru n'oge nnọkọ akụkọ. Ọ gbakwụnyere na a na -eji ego ahụ iji nweta ụgbọ ala, ngalaba, akụrụngwa iche na enyemaka ule. Akụkọ a na-abịa dịka Prime Minister kwupụtara ọgwụ mgbochi mbụ nke ihe karịrị pasent 75 nke ndị bi na Federation lekwasịrị anya n'izu gara aga.
St Kitts na Nevis Prime Minista Timothy Harris
Dabere na Prime Minista Harris, a ga -emefu nde dollar ise ọzọ na atụmatụ ahụike a na njedebe afọ. Nke a ga-eweta mkpokọta mmefu metụtara COVID-19 ruo ihe karịrị nde $ 23 nde EC.
Mgbe ọ na -ekwu okwu nke ọma na Mgbakọ General UN, o gosipụtara mkpa ọ dị ịnọgide na -etinye ego na sistemụ ahụike na -agbanwe agbanwe. “Anyị kwenyesiri ike na ọ nweghị onye nọ nchebe ruo mgbe onye ọ bụla nọrọ na nchekwa. Nke ahụ chọrọ ịnweta ọgwụ mgbochi na ngwaahịa ọgwụ ndị ọzọ, ”Prime Minister kwuru. “Anyị mere ihe na -enye mmemme nchebe ọha maka ndị nọ na mkpa. N'ezie, anyị etinyere ngwugwu mkpali COVID-120 nde EC $ 19. Anyị belatara ụtụ isi ego ụlọ ọrụ maka ndị were ọrụ ka ha jigide 75% nke ndị ọrụ wee webata VAT na mbubata mbubata ngwaahịa maka ngwaahịa metụtara ọrịa. ”
Prime Minista kelekwara ya St Kitts na NevisNdị mmekọ ibe ha maka mmesapụ aka ha n'inye ọgwụ mgbochi. Onye minista na-ahụ maka ihe na-ahụ maka mba ofesi Mark Brantley, onye nọ na New York maka UNGA, kelere Prime Minista India Narendra Modi maka ime ka nkesa nkesa ọgwụ mgbochi COVID-19 n'oge, nke o kwuru na o nyere ya ohere ịga mmemme ahụ.
Dị ka agwaetiti agwaetiti dịpụrụ adịpụ na mpaghara Caribbean, St Kitts na Nevis emeela ọganihu n'ime ọtụtụ afọ iji wuo akụ na ụba na-akwado onwe ya. Ọtụtụ ego obodo na -enweta na -adabere na njem nlegharị anya. Mgbe mkpọchi mkpọchi na nkwụsị nke ụlọ ọrụ njem, ego iji mejuputa Mmemme Mbelata Ogbenye (PAP)-atụmatụ na-achọ inye ezinụlọ ndị na-enweghị ego ụgwọ ọnwa kwa ọnwa nke $ 500-sitere na Nwa amaala site na ntinye ego (CBI).
Site na CBI, a nabatara ndị ọchụnta ego si mba ofesi na -agafe agafe nke ọma ka ha nweta St Kitts na Nevis 'nwa amaala bara uru iji gbanwere onyinye akụ na ụba. Nhọrọ ego na -enye ụzọ kacha arụ ọrụ nke ọma ịbụ nwa amaala nke abụọ.
Ndị ọchụnta ego nwere mmasị na St Kitts na Nevis n'ihi na ọ bụ nchekwa, ọchịchị onye kwuo uche ya ọgbara ọhụrụ. Ọ bụ ma ezinụlọ ma ndị enyi nwere mmasị, ebe ụmụ amaala nwere ike nweta ngagharị ụwa ọzọ n'ụzọ dị mfe, gbasaa akụ na ụba ha ma nwee atụmatụ B.